I-Offshore Banking Information ye-Asset Protection kanye Nobumfihlo
I-Offshore Banking Information
Ibhange lase-offshore isungula i-akhawunti yasebhange ngaphandle kwezwe elihlala kuyo. Inhloso ivame ukuvikelwa kwempahla, ukugcinwa kwentela (kuye ngokuthi izwe lomnikazi we-akhawunti), ubumfihlo bezezimali nokuhlelwa kwefa. Ngenxa yokuthi i-96% yezigwegwe zomhlaba zenzeka e-United States, abantu abaningi base-US baye bafuna iziphathimandla ngaphesheya kwemingcele yabo ukuze bavikele ingcebo yabo kuma-climes ephephile.
Ngezinye izikhathi, izinhloko zezindaba zikhuluma ngebhange lase-ocean. Izindaba ezinhle zithengisa izikhangisi ezimbalwa kunezindaba ezingamanga, ukugxila okunengi kuye kugxile ekubhekeni kwebhange: abakhohlisi bezinye izizwe bafihla ukuzuza okungekho emthethweni, amabhizinisi angenalutho ahlanza ngokufihlakele inzuzo engatholakali, abakhokhi bentela, njll. Ngaphezu kwalokho, amanye izindaba zihlobene nemithetho evezwe nguhulumeni wase-United States. Imithethonqubo isesimweni seminyaka yokulawula ukukhishwa intela, iyaqhubeka nokuxhasa imisebenzi yamaphekula nokukhishwa kwemali ezidakamizweni nezinye izimo ezingekho emthethweni. Ngokuvamile, uhulumeni wesifundazwe kudingeka athathe isinyathelo lapho esebenzisana nama-akhawunti anjalo.
Nakuba lezi zimiso zihloswe ukuvimbela imisebenzi engekho emthethweni, abalawuli bakahulumeni abathinteki ngabanye abafuna ukusebenzisa amabhange asezindaweni zasemhlabeni njengengxenye yohlelo lokuvikela impahla. Ukusebenzisa amabhange ase-offshore kanye nezinhlangano zamazwe ngamazwe njenge-LLCs kanye nokwethenjwa kuyaqhubeka kakhulu njengoba usongo lwezinkantolo luyanda.
Yimiphi izinguquko zenqubomgomo ezenziwe futhi lapho zigxile khona ngokuvamile zixhomeke ezweni. I-United States izama ukuqapha umsebenzi wamazwe athile ukuthi ubona amathuba amakhulu okusongela amaphekula kanye nobugebengu, futhi akunamathuba okuqapha amazwe onobungane obuhle.
Isibonelo, uhulumeni waseSwitzerland, izwe elivame ukuhambisana nama-United States, aliqaphelwa ngokucophelela. Kuvumile ukunciphisa izinguquko zenqubomgomo yobumfihlo. Lesi senzo sisho ukuthi ama-akhawunti asebhange aseSwitzerland, nakuba ahlinzeka ngezigaba eziqinile zobumfihlo kubanikazi be-akhawunti ye-offshore, azokwehlisa ezinye izihlangu zabo zokuvikela imfihlo uma i-akhawunti ibandakanyeka emisebenzini engekho emthethweni.
Amazwe ahlinzeka ngamabhizinisi ase-Offshore
Kuneziphathimandla eziningana ezinikezela ama-akhawunti asebhange ase-offshore ezakhamuzi zakwamanye amazwe, kuhlanganise nalawo ase-United States. Amaningi ala mazwe awatholakali ngokwanele ukuba uhulumeni wase-United States avume ukuhlolwa okusheshayo nganoma isiphi isikhathi esikhathini esizayo esiseduze. Ngaphezu kwalokho, iningi lalabo ababalwe lapha banemithetho eqondile yobumfihlo ukuvikela umsebenzi wokugcina umthetho wabanikazi be-akhawunti. Amanye alawa mazwe afaka phakathi, kodwa awanqunyelwe ku:
I-British Virgin Islands
I-English Channel Islands yeJersey neGuernsey
"I-Offshore" Ukuhlanganiswa e-United States
Kanye nohlu lwamanye amazwe okukhulunywe ngenhla, kukhona nethuba labantu abahlala ngaphandle kwe-United States ukuthola izinga elilinganayo lokuvikela i-akhawunti yasebhange elifana nelelo elinikezwa ngama-akhawunti asebhange ase-offshore. Isibonelo, i-Delaware iletha kubanikazi be-akhawunti yasebhange angaphandle, nakuba kungabikho konke, kokuvikela nokukwazi, okutholakala kulabo abasebenzisa ama-akhawunti asebhange angaphandle. Amanye ambalwa athi ukusebenza ngaphandle kwentela engenayo yenkampani ingaletha nezinzuzo kubanikazi be-akhawunti yasebhange. Ezinye zazo zihlanganisa Nevada, Washington, naseWyoming. Ngakho-ke, umuntu wase-US ongakakulungeli ukuhamba e-offshore noma umuntu ohlala ngaphandle kwe-USA unezinketho ezithile ngaphakathi e-United States.
Izinzuzo Zokuba ne-Akhawunti Yase-Offshore Bank
I-akhawunti yasebhange ye-offshore noma i-akhawunti yasebhange evuliwe enkundleni ngaphandle kwezwe lomnikazi we-akhawunti isetshenziswa ezinye zezizathu ezilandelayo:
Ama-akhawunti amaningi asebhange ase-offshore anikela ngeminye imisebenzi ngezindleko ezincane kune-akhawunti yasebhange e-United States. Amabhange ase-Offshore ngokuvamile anikela ngamanani entengo engcono kunalokho okuvame ukunikezwa e-United States. Kungani? Ngoba izindleko zokuqhuba ibhange ziphansi emazweni amaningi angaphandle. Lokhu kubangela imali eyengeziwe esele emabhokisini asebhange ukuze akhokhe imali.
Iziphathimandla eziningi ezivumela ama-akhawunti asebhange angaphandle kwezakhamuzi zakwamanye amazwe zivame ukulinganisa intela ephansi, ukuheha izinkampani ezimbili kanye nabantu abazimele ukuba benze ibhizinisi nabo. (Khumbula ukuthi abantu base-US bakhokhiswa intela emhlabeni wonke kungakhathaliseki ukuthi izimali "zibuyiselwe" noma cha.
Ukuboleka imali ngenani lentela ephansi.
Imithetho embalwa uma uboleka imali.
Ngokuyinhloko, amabhange ase-offshore ahlinzeke ngokuyimfihlo kakhulu futhi ngokuvamile enza kube nzima kwabangaphandle ukuthola ulwazi mayelana nenkampani noma umuntu ophethe i-akhawunti. Ubumfihlo buhlukahluka ngezwe.
Amazwe anombuso ozinzile nokuchuma uletha ukuvikeleka okuncane ezinkingeni zezomnotho, zezombangazwe nezomnotho ezingase zenzeke ezweni lakubo. Ngokwemvelo, la mazwe azinzile anika ukukhetha okungcono kokutshala izimali kokubili wena nebhizinisi lakho. Njengoba umnotho e-United States uqhubeka ukushintshashintsha, uzama ukukhipha imali ekugcineni kwezomnotho, lo mbono usulokhu ukhangisa nakakhulu kumaqembu angasese namabhizinisi abo.
Kunezinketho eziningi zokutshala izimali. Ngokuphambene nalokho umtshali-zimali angase anikelwe nge-akhawunti yasebhange ezweni lakubo, abantu abaningi abakhetha ukusebenzisa ama-akhawunti asebhange ase-offshore bathole ukuthi lawo ma-akhawunti ayenawo kuphela isakhiwo esingcono kodwa i-opportunistic degree of flexibility. Isibonelo, amabhange amaningi ase-offshore anikeza ama-akhawunti athakazelisayo, izinketho zokutshala izimakethe zamasheya, izinsimbi eziyigugu, njll.
Ibhange le-inthanethi liyatholakala.
Izinsizakalo zenkonzo yamakhasimende. Abanikazi abaningi be-akhawunti yasebhange base-offshore abanjengoba leyo nsizakalo yamakhasimende itholakala endaweni yesikhathi esivumelana nalokho yezwe lakubo.
Iningi labantu abasebenzisa ama-akhawunti asebhange ase-offshore bavula ama-akhawunti abo ezinkampani zomthetho zasolwandle. Lezi zinhlangano zingashintsha ezinkampanini ze-offshore kanye ne-LLCs ezinkampanini zokuvikela izimpahla zasolwandle kanye nezisekelo, kuye ngezidingo zomuntu ngamunye.
Ama-akhawunti ase-Offshore nawo asetshenziswa ngabasebenzi abaqashiwe yi-offshore, abasebenzi bamazwe ngamazwe, abahambi, nabokufika.
Abanikazi bezinkampani bathola ukuthi ama-akhawunti asebhange ase-offshore anikeza izinzuzo uma usebenzisa inqubo yokuvuselelwa kwezezimali. Izinkampani ezizama ukwenza lokhu zingasebenzisa ama-akhawunti asebhange ase-offshore futhi zisebenzise izinhlangano eziningi zamazwe omhlaba, zibavumela ukuba babonise inzuzo noma ukulahlekelwa ngokwezimali kuye ngokuthi izindlela zokubala ezisetshenzisiwe. Ngokwemvelo, ukulandelwa ngokugcwele komthetho kanye nentela kunxuswa kakhulu.
Esinye isizathu esenza ukuthi abanikazi bezinkampani basebenzise ama-akhawunti asebhange ase-offshore kungenxa yenkululeko engaphezulu kwezimfuneko zezimali zenkampani, kubandakanya ikhono lokukhokha ngokushesha futhi kalula abasebenzi nabathengi kwamanye amazwe.
Yazi Imithetho Yakho Yentela
Ngaphandle kokwaziswa okukhulunywe ngenhla, abantu abaningi kanye nemigomo yamabhizinisi afuna ukwakha ama-akhawunti asebhange ase-offshore abhekana nalokhu kulandelwa ngenkolelo yamanga yokuthi inzuzo, inzuzo eyinzuzo, nezinye izinhlobo zemali engenayo ayikhokhwa intela ezweni labanini be-akhawunti. Lokhu kucabanga futhi ukwehluleka ukukhokha intela ezweni lakubo akukwazi nje ukuthi kube yinto engavumelekile ngokwezimali kwenkampani ngokwayo, kodwa ezimweni eziningi, futhi akukho emthethweni.
Ngokwesibonelo, e-United States kunomthetho wentela odinga izakhamizi zase-United States ukuthi zibike noma yimaphi imali ezenziwe kwamanye amazwe, njengoba kuchaziwe kwifomu le-intela yase-United States 1040:
"Kumelwe ubike imali engenayo engafanele, njengezintshisekelo, izabelo kanye nezimpesheni, kusukela emithonjeni engaphandle kwe-United States, ngaphandle uma ukhululekile umthetho noma isivumelwano somthelisi. Kumele futhi ubike imali engenayo, njengamaholo kanye namathiphu, kusukela emithonjeni ngaphandle kwe-United States. "
Ngaphezu kwalokho, okukhona kuSheduli B, ifomu lakho lentela licela ngokuqondile, ngaphansi kwesigaba se-Interests and Dividends, ukuthi ubonisa isithakazelo nokusabalalisa kunoma yiziphi ama-akhawunti noma amathenda asekude.
Ngakho-ke, naphezu kokungaqondi kahle ukuthi i-akhawunti yasebhange ye-offshore ivumela umuntu ukuba akhokhe intela yase-United States, noma ubani ogcwalisa ifomu lentela angabona ukuthi le nkolelo ayilungile. Inqubo efanele yezomthetho ukubika yonke inzuzo ezuzwa ngasolwandle. Eqinisweni, amazwe amaningi adinga izakhamizi zalo kanye / noma izakhamuzi ukuthi zibike noma yiliphi imali ezuzwa ngaphandle kwamandla ayo.
Yiziphi Izinkonzo Zokuhlinzeka Ngama-Offshore Amabhange?
Amabhange amaningi ase-offshore anikezela ngezinhlobo ezifanayo zezinsizakalo njengebhange lase-United States. Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi, banikela ngaphezulu. Noma kunjalo, kuye ngokuthi iziphathimandla ze- amabhange ngaphesheya, imithetho namathuba angashintsha, futhi imingcele ebekiwe ezweni uhulumeni wase-United States nayo ingashintsha.
Ngokujwayelekile, amabhange amaningi ase-offshore anikeza:
Ama-akhawunti wokuphatha izimali
Ama-akhawunti wokugcinwa kwezokuphepha kanye nezinsizakalo zokuhlanza
Ama-akhawunti omhlalaphansi kanye nezinketho zokonga
Ukuhwebelana ngamazwe ngamazwe, ukushintshwa kwamanye amazwe, kanye nokuthengiswa kwezimali eziningi
Ukusungula i-akhawunti yasebhange ye-offshore ngokuvamile kulula. Okokuqala, yakha i-offshore corporation noma i-LLC. Ngokuvamile inkampani ayidingi ukwakha amandla afanayo e-offshore njenge-akhawunti yasebhange. Okwesibili, eziningi zalezi zingxelo zingenziwa ngaphandle kwesidingo sokuhamba. Ngakho-ke, ikhono lokwenza elilodwa lala ma-akhawunti kokubili kulula futhi kulula. Ngenxa yezinhlobonhlobo zamazwe ongakhetha kuzo, ungafanisa izwe lakho elikhethiwe ukuze lihambisane nezidingo zakho.
Funa Isiqondiso Sokuhlola
Amabhange amaningi ase-offshore ngeke avule ama-akhawunti asebhange kubantu bezinye izizwe. Amanye amnandi ukusebenzisana nawo futhi amanye aphansi kakhulu. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uthole usizo oluvela kuchwepheshe onguchwepheshe obhange bebhishi. Kunezinombolo kuleli khasi kanye nefomu ukuqedela ukuxoxa nengcweti onolwazi onokuthola ulwazi oludingekayo ukuze wenze isinqumo.
Uma ucabanga ngokudala i-akhawunti yasebhange ye-offshore futhi uzingabaza ngenxa yezinye zezinhlezi zemithombo yezindaba, yazi ukuthi ukuphishekela, uma kwenziwa ngokomthetho futhi ngokuphepha, kungaba mnandi kakhulu futhi kuzuze labo abafuna inkululeko yezezimali, ukuvikelwa kwempahla, ubumfihlo, nemikhawulo embalwa. Cishe amaphesenti angamashumi amahlanu enhloko-dolobha yomhlaba yenza indlela yokusebenzisa ama-akhawunti asebhange ase-offshore. Lokhu kusho ukuthi ama-akhawunti asebhange ase-offshore ayathandwa kakhulu futhi avamile.
Ama-akhawunti asebhange ase-Offshore njengamanje abamba cishe amaphesenti angamashumi amabili nesithupha yomnotho wezwe. Lesi sibalo sihlanganisa izinkampani eziningi ezinkulu ezisekelwe e-United States futhi zisebenzise ama-akhawunti asebhange ase-offshore ukuze zisebenzise izinzuzo zazo. Inani elilinganisiwe lemali yase-United States ekholelwa ukuthi ibanjwe emabhange ase-ocean kukhona cishe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha, okuyinto enkulu yomcebo emhlabeni.